Ụbọchị My Pet » 5 Ara (Ma, ezi) Ihe dị dịwara Ị Mkpa Ịmata!
Ọ nwere ike ịdị na-akpali n'ezie mgbe ị na-eme nnyocha ma chọpụta ihe ndị ị anụghị banyere ụwa a nke mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. Ụfọdụ eziokwu ị na-agụ nwere ike inyere gị na-akpata na-ụlọ isi ma ọ bụ agbamakwụkwọ akwụkwọ ịkpọ òkù mgbe ndị ọzọ na-alụ nwere ike ma ọ bụ ọbụna dị na-akpali. Nọdụ ala azụ, na-enwe ma-tụrụ site ise a mkpakọrịta nwoke na nwaanyị eziokwu!
Ọrụ Romances bụghị nanị A ụzọ Daha The Day!
Mmekọrịta na malite n'ebe ọrụ mmekọrịta ijuanya nwere nnọọ elu ọma ọnụego na ihe 40% ọrụ romances agwụcha ke alụmdi na nwunye bụ nke dị ịtụnanya n'echiche nke e a ọtụtụ ndị ga-kama adịghị ebi ndụ ọ bụla ndị ọzọ’ akpa na otú ma n'otu oge ahụ, ọ bụghị ihe ijuanya kpamkpam. Eleghị anya ị hụrụ n'anya ihe ị na-eme. Ha eleghị anya kwa otú i nwere ihe na-emekarị ndị ọ bụla ọzọ na ị na-eji oge dị ukwuu na ọ bụrụ na ọnụ e nwere ihe mma na abụọ e nwere bụ ezigbo ohere na ya ma eleghị anya ga-eto n'ime ịhụnanya.
TLC na Chemistry.com stats na n'oge gara aga gosiri na a nwaanyị na a mmanya ga-ekwurịta elu nkezi nke minit isii ọzọ ngwa ngwa ma ọ bụrụ na o yi anam-elu. M na-eche n'ihi na ọtụtụ akụkụ ọ bụrụ na mmadụ fancies onye ha na-a bit-atụ ma ọ bụ chatty ha ga-ikori gị elu na agbanyeghị ma na-asị na m na-eche na ọ pụrụ inyere. Ị nwere ike kpuchie blemishes na-adị gị njikere iji na ụwa. Ma ọ bụ na obi ike ma ọ bụ eziokwu gị tụrụ adịghị egosi ọkọkpọhi ị onye ị chọrọ bụ na-emeghe na-arụrịta ụka!
Agụụ mmekọahụ na-!
ABC kọrọ na kasị nkịtị mmekọahụ fantasy na-enwe mmekọahụ na-abụghị na 57% mgbe 14% nwere a threesome na 21% nke ha na-eche banyere ya. Erughị a ise kwuru na ha na-ghọgburu na ha na onye òtù ọlụlụ, ma ihe atọ n'ime ha na-eche banyere n'ịghọ aghụghọ ule. Dị nnọọ ihe karịrị ọkara nke ndị America na-ekwu na ha bụ ndị na-emeghe ma na-atụle ihe ndị a fantasies na ibe ha. Echere m na ọ bụ oké na ọtụtụ na-na-na-emeghe ha mmekọ banyere ihe excites ha mmekọahụ ma m chere na m ha kwesịrị ịbụ na-azụ “M na-eche banyere ịghọ aghụghọ ule na ị nwa.” akara!
Atọ Abụghị A Otuowo!
Onye okụtde ya ike malite mkparịta ụka na a na-elekọta mmadụ omume ma ọ bụrụ na e nwere enyi abụọ guzo ọnụ ma na ha na-dọtara otu n'ime ha. Ha achọghị ndị ọzọ enyi iche na ha gbahapụrụ enyi. Ya mere ọ bụrụ na ị na-achọ ịhụ na pụrụ iche na mmadụ ewetara enyi abụọ tinyere!
Alụmdi na Nwunye stats!
New York na Washington nwere ọtụtụ ala bi onye na-abụghị di na nwunye. Ihe mbụ bụ 50% na nke ikpeazụ a bụ 70% otú gafere ka New York na Washington ime! Na usoro nke na-ekwu na elu alụmdi na nwunye percentages e Idaho na Utah na 60% na 59%.